Fanavaozana fotsiny. Na dia mety tsy hitovy aza ny endriny, dia sahirana aho niditra tao amin'ny tranokalan-tserasera. Tsy manana an'io fanazavana amin'ny endriny elektronika io aho, noho izany dia tsy maintsy ampidiriko ao ny fomba efa tranainy.
Amin'izao fotoana izao, raha mijery moto mialoha ny 1980 ianao, dia mahita lisitry ny ampahany amin'io motera io, raha misy. Tamin'ity fahavaratra ity aho dia niditra ny motera Evinrude / Johnson / OMC / BRP avy amin'ny 1980 ka hatramin'izao. Asa goavana izany, saingy nataoko izany. Amin'izao fotoana izao dia miditra ny faritra rehetra amin'ny sora-baventy Sierra aho ary hanondro azy ireo amin'ny môtera miara-miasa aminy, miaraka amin'i Amazon mifandray. Amin'izao fotoana izao dia miditra ny piston aho ary manana pejy 100 maro kokoa! Mino aho fa ny vokatra dia ho mendrika ny ezaka.
Manakaiky ny faran'ny fifanandrinana ny lisitr'ireo tapany lava sy ny motors miasa miaraka aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miditra ao amin'ny tabilao fampiharana aho fa rehefa misy olona misintona ny môtô dia haseho ny lisitry ny tapakila mifandraika amin'izany. Tetik'asa lehibe kokoa noho ny nieritreretako azy io, fa amin'izao fotoana izao aho dia eo amin'ny pejy vitsivitsy farany amin'ny fidirana.
Na dia niezaka mafy mafy aza aho mba ho marina araka izay azo atao, dia azo antoka ny fahadisoana sasany. Raha hitanao ny ampahany izay fantatrao fa tsy miasa amin'ny motera na zavatra tokony hanitsy anao, azafady mba ampahafantaro ahy amin'ny famoahana ny fanehoan-kevitra eto.
Nianatra be dia be tamin'ity dingana ity aho, indrindra fa izay tsy misy intsony amin'ny motors efa ela. Manantena ny hiverina aho ary hanao fikarohana mba hahitana raha afaka mahita vahaolana tsy dia mazava loatra. Ny fampidirana na soso-kevitra rehetra dia raisina ary hampiasaina eto mba hahasoa ny hafa.
Ankehitriny, manana tranokala amin'ny fiteny maro izahay, mahagaga ahy ny habetsahan'ny mpitsidika anay sy ny habetsan'ny fiteny ampiasain'izy ireo. Miarahaba ny rehetra aho fa toa samy manana fitiavana iraisan'ny motors miasa izahay rehetra.
Manana hevitra bebe kokoa momba ny fomba hanatsarana ity tranonkala ity aho ary hanao ezaka be dia be ao anatin'ireo volana vitsy manaraka. Zavatra telo no tiako hampidirina amin'ilay tranonkala dia ny fitaovana, ny fandefasana fonosana ary ny boky torolàlana. Ireo no zavatra tadiavin'ny olona maro. Mijanona tsy tapaka ary miverimberina foana.
Nandeha namakivaky ny lisitra rehetra aho ary nampiditra fanontaniana iray izay hamoaka ny valiny. Indraindray aho dia tsy maintsy mampiasa teny manan-danja sy / na nomerao mba hahazoana vokatra tsara.
Miara-miasa amin'ny Amazon sy Ebay, mijery ny ampahany ihany amin'ny tsirairay, indraindray aho mahita fahasamihafana ny vidiny eo amin'ny roa. Indraindray i Amazon dia hahazo ny vidiny tsara indrindra, indraindray ny eBay dia manana ny vidiny tsara indrindra. Amin'ny tranga roa, dia azonao atao ny mahita ny tsara indrindra vitanao amin'ny fijerinao azy roa.
Ny ankamaroan'ny faritra amin'ny Ebay dia tsy ao anaty format malalaka. Ny vidinao dia aseho amin'ny vidin'ny "Buy it now", ary tsy misy fepetra ara-barotra mihitsy.
Raha mijery ireo rehetra ireo amin'ny eBay, azoko ny dikan'ny hoe ny olona mivarotra ny ampahany dia ireo olona izay hitanao any amin'ny departemantan'ny faritra amin'ny mpivarotra sy ny fivarotana an-dranomasina. Izy ireo dia mitady fomba vaovao hivarotana ny vokatra ao amin'ny Internet. Toy ny hoe manana vintana tsara kokoa aho mahita fahasahiranana sy sarotra ny mahita faritra amin'ny eBay.
Rehefa mijery mialoha aho, te-hanolotra karazan-tsoavaly ho an'ny motera tsirairay aho, ary koa ny boky torolàlana, ary ny fandefasana plugs. Raha vao manana ireo rehetra ireo aho, te-hiverina amin'ny alàlan'ny motera ary hametraka ny filazalazana momba ny motera tsirairay ary angamba fanehoan-kevitra fanampiny.
Fotoana vitsy lasa izay no nilazako zavatra tao amin'ny fanehoan-kevitra momba ny fandrosoana, saingy tsy midika izany hoe tsy sahirana aho. Vao haingana aho dia nanampy tsimoka fantsona ho an'ny marika maro ankoatra an'i Johnson / Evinrude. Ny fonosana fanipika ho an'ny marika hafa dia ny fanindroanao voalohany fa efa akaiky an'i Johnson / Evinrude isika ary vonona ny hifindra any Mercury, Yamaha, Honda, ary mety bebe kokoa.
Amin'izao fotoana izao dia vonona hanampy ny propeller aho. Nanjary sahiran-tsaina foana aho rehefa nividy propulsion tamin'ny motera satria tsy nahita fomba tsara hahafantarana ny zavatra rehetra aho ary hiasa amin'ny môtera. Miezaka ny manala ny siansa voodoo aho ary manamboatra ny fanoloana tsotra kokoa toy ny nataoko tamin'ny fonosana.
Nanao zavatra aho tao ambadiky ny fivoaran'ny sehatra. Ny tena marina dia ny fanampiana ny SSL fiarovana, noho izany ny adiresin'ny pejy dia manomboka amin'ny https: // ..... Raha tsy misy ny SSL fiarovana, ny olona dia hahazo hafatra milaza zavatra toy ny "Tsy sitrana ity tranonkala ity", izay mety ho kivy. Ankehitriny dia tokony misy fanalahidy maitso maitso hita ao amin'ny bar of the browser. Hatramin'ny fanaovana izany, nitombo ny fifamoivoizana, indrindra ny fifamoivoizana iraisam-pirenena. Ny sary etsy ambany dia mampiseho ny toerana namakian'ny olona ny tranonkala tamin'ny May 2019. Heveriko fa mahazo fandrakofana manerantany isika afa-tsy any afovoan'i Afrika. Ny olona manerana izao tontolo izao dia toy ny manamboatra ny motera ivelany. Reko avy amin'ny olona mankasitraka ny tranokalan'ny tranokalany.